3 European Amadolobha Kuhle avakashelwe ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 3 European Amadolobha Kuhle avakashelwe ngu zemininingwane
Ziningi kakhulu lamadolobha amahle kakhulu eYurophu, futhi yini more, kulula khona ukuba babavakashele zonke. Ukuhamba ngesitimela yindlela enhle ukubona lezi ebhakedeni-uhlu izindawo. Nazi 3 amadolobha aseYurophu engcono wavakashela ngesitimela.
Siqala amadolobha ethu European engcono wavakashela ngesitimela nazo ifa: esetshenziswa, Belgium
Kuningi Belgium kuka ushokoledi nje. Bruges idume lisaba ngumuzi canal, efana Venice futhi Amsterdam. Empeleni, wonke umuzi kuyinto UNESCO isayithi. Ukuvakashela Bruges ngesitimela umqondo omkhulu kusukela Bruges sesitimela esikhulu nje 10 amaminithi ukuhamba kuzo zonke ezinkulu yezitolo ezitaladini futhi 20 imizuzu esikweleni emakethe. Liphinde lunikeze izitimela ukuba zonke ezinye emadolobheni amakhulu Belgium, kanye ezincane, France, kanye Thalys isitimela EParis-Brussels-Ostend.
Ngakho ukubhuka ithikithi lakho isitimela futhi ujabulele amasayithi elihle esetshenziswa. Qiniseka ukujabulela mayo okuthosiwe kanye lendawo ubhiya.
Ukuze kwelanga: Seville, Spain
Uzizwa kwelanga European emadolobheni engcono wavakashela ngesitimela kanjani? Kuthiwani Andalucian langa namathafa namaMoor izakhiwo? Kuzwakala kukuhle? Khona-ke Seville ukuphi.
abahambi Iningi kokucutshungulwa isitimela uhambo Spain cabanga Barcelona noma Madrid, kodwa jewel yangempela isuke eningizimu okwengeziwe, e idolobha lesine ngobukhulu yeSpain.
Santa Justa sesitimela Seville sika iyingxenye ijubane eliphezulu, ezinhlanu yomugqa somhambi inkonzo ixhuma 17 emadolobheni amakhulu Spanish, ngakho akukho indlela engcono ukuhamba kuka ngesitimela.
Uma uvakashela, uqiniseke ukuthi uvakashele lombhishobhi umoya-ukuthatha uhambe uhambo Tapas – ungakwazi book with an organized group.
amadolobha aseYurophu engcono wavakashela ngesitimela Ukuze indawo: Munich, Germany
Munich ukuxuba enhle sezakhiwo ezintsha njengekhono ekomkhulu BMW futhi Allianz Arena futhi izingosi zomlando efana Nymphenburg Isigodlo and the Munich Hofgarten and that is why we have put her on our European cities best visited by train.
lapho evakashele Germany ngesitimela, ungakwazi hop e-Venice, udabula Verona, Trento, futhi Innsbruck, futhi – Ngemva kwamahora ayisikhombisa nje – kube Munich. Imibono ngakulo jantshi kukhona obumangalisayo. Imizana emihle yase-Italy yenza indlela ye Alps khona-ke Dolomites ngaphambi kokufika e Munich.
Uma uvakashela, qinisekisa ukuzama ezinye a ‘Munchner Weiswurst', Umvimba wakhonza pretzels kubhakwa futhi lwesinaphi amnandi. Geza phansi nomunye kwaqashwa besizulu Bavarian.
Ingabe waphefumulelwa ukuba uvakashele komunye wale mizi langa European? amadolobha aseYurophu engcono wavakashela ngesitimela kungenziwa Kubhaliselwe at the best ezitimela amanani Saveatrain.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F3-european-cities-best-visited-by-train%2F - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Izikhangibavakashi imvuenline travelfrance uhambo lokuhamba